यो प्रकृति मा अमानवीय छ किनभने युद्ध, जो कोहीले छोडूँगा थिएन। र यो 1941-1945। भयानक घटनाहरू पछि आधा भन्दा बढी एक शताब्दीमा भएको यद्यपि, मातृभूमि को खातिर आफ्नो जीवन जो दिनुभएको नायक बारेमा पढ्न indifferent हुन सक्दैन। विशेष गरी यदि यो छ अझै पनि एक बच्चा। पर्वतमा को knower मा प्रारम्भिक र अन्तिम म्याद अघि परिपक्व ... असाध्यै आफ्नो परिवार र देश एक बच्चा प्रेम ... पनि आफ्नै जीवन ..., बोल्ड विचारशील, सबै भन्दा अमानवीय परीक्षण लागि तयार लागत मा शत्रु बदला लिन वाचा ... तर अझै पनि। उहाँले एक पूर्व युद्ध अनुभवी व्लादिमीर Bogomolov आफ्नो काम समर्पित। छ कि "इवान" (यो लेखमा सम्भव एक सारांश पढ्नुहोस्) एक पटक फेरि प्रमाणित कसरी नमिल्ने यी दुई शब्द: "युद्ध" र "बच्चाहरु"।
प्लट: एक रात अतिथि
यो Dnieper को बैंकहरू मा, अक्टोबर थियो। को अभिनय लप्टन बीस वर्ष Galtseva परिचर को battalion कमान्डर रात मा जगाए। उहाँले detained कसैले को किनारा मा छ। उहाँले प्रश्नहरूको जवाफ इन्कार गरे र आफ्नो superiors उसलाई लिन माग, पानी मा floundered। Galtsev एघार वर्ष को केटा को प्रवेश मा देखे। उहाँले थियो सबै भिजेको र गरिएका नीलो देखि चिसो। र "आफ्नो आँखा ... म महसुस आन्तरिक तनाव र ... अविश्वास र वैमनस्यता।" को लप्टन उहाँले थियो र के नदी थियो जो Lad देखि पत्ता लगाउन खोजे। त्यसैले कथा Bogomolov "इवान" सुरु हुन्छ।
निम्नानुसार सार कुरा वर्ण सारांशित गर्न सकिन्छ। बेवास्ता गर्दै प्रश्न, केटा उल्लेख मात्र नाम र सबै आवश्यक रिपोर्ट यसलाई मुख्यालय। Galtsev लामो इन्कार गर्न त्यसैले र भनिन्छ मात्र एक अतिथि नाम लेफ्टिनेन्टस्क्याट-कर्नल Gryaznov र कप्तान choline। जायका अन्य अन्त मा, नाम Bondarev सुनवाई। आदेश दिन केटा एक कागज, मसी र रेकर्डिङ तुरुन्तै SENT गर्न मुख्यालय। र उसलाई पाठक Bogomolov अचम्मको, पहिले नै जाने लागि भनेर बताउन।
इवान (सारांश दिन्छ तपाईँले देख्ने नाम को केटा अघि तपाईं पढ्ने पुस्तक) ध्यानपूर्वक गणना गर्ने अनाज लिएको बाहिर आफ्नो जेब र सुई, त्यसपछि लामो, लेखन कुरा। अन्तमा म, एक खाम मा सबै राख्नु ध्यान छाप र मुख्यालय पठाउन आदेश दिए। Galtsev, होइन विश्वास केटा अब महसुस असहज र चाहन्थे गर्न कृपया उसलाई हरेक तरिका हो। उहाँले न्यानो पानी तयार र बाँकी खाने खुसीले गदगद। खाएको भएको एक सानो केटा पल्टिने र Galtsev पोस्ट जाँच गर्न गए। उहाँले भयो कुरा बुझ्न खोजे। जो छ यो र Bondarev यसको बारेमा यति चिन्तित मुख्यालय मा किन? उहाँले Dnieper नदी पार पौडी खेल्न त चिसो कसरी सक्छ? हरेक वयस्क शक्ति अन्तर्गत छ। छोड्नु कुरा दृश्य संग सैनिकहरू जो मिली केटा, यो अनुमति दिन्छ एक सारांश को "इवान" को कथा। Bogomolov भाग कडा जोड असामान्य भयो गर्न Lt., battalion थियो तयार गर्न बल गर्ने Dnieper।
कप्तान choline को आगमन
उहाँले फर्कंदा, Galtsev Bondarev पहिले नै जागा देखे। कप्तान चाँडै आइपुगे। उहाँले केटा गर्न भाग्यो, र अब मात्र लेफ्टिनेन्टस्क्याट आफ्नो अतिथि को नाम सिके। इवान तुरुन्तै अप perked र पहिलो पटक मुस्कुराया। Choline उहाँले Katasonych लागि प्रतीक्षा थियो भने छ। जो केटा जवाफ गर्न, त्यहाँ त्यहाँ केही Dikovke गर्न असम्भव थियो किनभने, जर्मन थिए। अर्को त्यो लग मा floated र लगभग डुबेर मर्छन् थपियो। त्यसैले बिस्तारै नायक Bogomolov को छवि प्रकट गर्छ। इवान (सारांश, दुर्भाग्यवश, superficially मात्र नायक बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ) अझै पनि लेफ्टिनेन्टस्क्याट सानो र कमजोर देखिन्थे।
Choline को dugout मानिसहरूलाई हटाउन र गोप्य मिसिन समायोजन आदेश छ। दस मिनेट पछि एक शर्ट र प्यान्ट एक पदक र आफ्नो छाती मा एक पदक संग, वस्त्र लगाएका बालक, फेला परेन। मा तालिका, तिनीहरूले कुरा र लप्टन मिली त्यस Bondarev SENT गर्न Suvorov, तर उहाँले अस्वीकार: कुनै। र जब choline हालिएको वोदका, केटा बनाइएको टोष्ट: "... भनेर म सधैं आउन फिर्ता" - र लियो एक घूंट देखि एक मग। चाँडै इवान उठे र माग: "! जाऔं" choline भ्रमित छ, तर काट्न थिएन।
जानु अगाडि Galtsev केटा हात हल्लाउँदै र भन्नुभयो: तथापि, Bondarev सही "... Vanya, नमस्ते!": "! छैन अलविदा, र अलविदा" - र askance देख्यो। यो दृश्य पनि नायक भेट्न किस्मत छन् यसलाई स्पष्ट पार्छ। र यो थप रहस्यमय बन्नेछ।
Bondarev, "इवान": निम्न दिनमा भयो घटना को एक संक्षिप्त सामग्री
को battalion मा Katasonov अकस्मात, आइपुगे पनि फौजको जाचबुभ्क platoon विभाजन गर्न पुगे। तिनले अवलोकन पोस्ट वरिपरि हिंडे अन्य पक्षमा स्थिति अध्ययन। Katasonova देखि Galtsev वाक्यांश Vanya (यति प्यार आफ्नो फोरमैन भनिन्छ) सुने: "उहाँले घृणा को प्राण जल छ थियो।"
Choline पछि तीन दिन आए। उहाँले पनि सेना inspected र एक लामो समय को लागि, योजना र रक्षा कार्ड मा देख्यो को Dnieper को विपरीत बैंकमा। ठूलो कुरा तयार, यो स्पष्ट Bogomolov बनाउँछ।
इवान (सारांश सबै कार्यहरू Katasonova र choline विवरण विवरण समावेश छैन) बाँया रूपमा mysteriously एक रात देखियो।
"उहाँले हामी सपना देख्यो कहिल्यै यति धेरै मार्फत भएको छ"
बाट कुराकानीमा आफ्नो अतिथि Galtsev बुझे त्यो रात Bondarev अवश्य अगाडि गर्न अन्य पक्ष, बस गर्न जर्मन मा पछिल्लो। को लप्टन उसलाई यो लिन आग्रह, तर अस्वीकार गरिएको थियो। इवान दयालु गऱ्यौ र आफ्नो बेल्ट Galtseva घर चक्कु मा देखे - आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी को स्मृति - उहाँलाई यो दिन आग्रह गरे। इन्कार गरे होने, उनले एक बच्चा जस्तै माथि कार्य गर्न थाले।
समुद्र तट बाटो मा - यो अन्तिम तयारी गर्न आवश्यक थियो - choline इवान मेरी बहिनी को हात मा मृत्यु कसरी भन्नुभयो। आमा थियो गइसकेको र आफ्नो पिता हत्या मा पहिलो दिनको युद्ध। उहाँले गए , मृत्यु शिविरमा भएको गुरिल्लों थियो। बदला र कुनै एक सक्छन् यसलाई बन्द गर्न अब उत्सुक। को खत पहिलो बैठक मा अझै पनि छ देखे अध्ययन गर्न पठाएको, तर उहाँले गोली को काँध Galtsev थियो आफ्नै को अन्धकारमा बच। अब, त्यो सेवा मा फौजको जाचबुभ्क, र आफ्नो साथीहरूको गर्नुभएन। एक आवारा मानिरहेको, उहाँले नाजीहरूले सबैभन्दा पछाडिको मा प्राप्त र बहुमूल्य जानकारी प्राप्त गर्न सकेन।
सबै तयारी गरेका थिए जब, Galtsev उहाँले केटा गरेको सामान्य बच्चाको प्ले फेला जहाँ dugout, फर्के। तर केही घण्टा पछि उहाँले एक मिशन मा जाने थियो, व्लादिमीर Bogomolov जोड दिए। इवान (सारांश दिन्छ बस उल्लेख यसलाई एलईडी) यो क्षण व्यवहार कुनै पनि अन्य आफ्नो साथीहरूको।
Choline अचानक प्रवेश पछि Katasonova तत्काल विभाजन गर्न बोलाए कि रिपोर्ट - यो सर्जन्ट हत्या जो इवान, कुरा होइन एउटा चाल थियो। बरु, उनले अन्य पक्ष Galtsev गए।
पछि पार गर्ने Dnieper, मानिसहरू गरिएका पर्खने लागि लामो रूपमा बाह्र इवान (वास्तविक नाम - Buslov) bypasses गस्ती। उहाँले रात बारे बीस किलोमिटर जाने थिए र त्यसपछि - छैन भन्दा कम तीस छ। Choline, "लामो समय फर्केर जान हिम्मत गरेनन् छ, र पछि, हृदय मा dugout तिनीहरूले तेस्रो वर्षको लागि लडिरहेका छन् कि, भन्नुभयो, तर मृत्युको नजरमा - इवान रूपमा! - ... र म देख्यो छैन "।
उहाँले एक नायक रूपमा मृत्यु
Galtsev अझै सकिएन भूल केटा। र जब त्यो मिली आफूलाई मा बर्लिन, मैले देखे रहस्य प्रहरी दर्ता कार्ड। मा फोटो को एक परिचित अनुहार stared। पानामा लागि पिन कार्ड मा वर्जित क्षेत्र एक किशोरी detained संकेत, स्थानीय बासिन्दा एक उसलाई इवान चिनाए। उहाँले चार दिनको लागि केरकार गरियो, तर उहाँले defiantly मा आयोजित र कुनै पनि जानकारी रिपोर्ट छैन। डिसेम्बर 25 बिहान सबेरै, 1943 उहाँले गोली थियो। को किशोरी समातिए जसले एक प्रहरी, एक सय चिह्न पायो। त्यसैले काम Bogomolov ( "यूहन्ना") समाप्त हुन्छ।
शोकमा भयो पूर्णतया बुझ्न क्रम मा, पुस्तकको छोटो सामग्री पढ्न, पर्याप्त छैन। पूर्ण पाठ मात्र तपाईं युद्ध भयानक वर्ष मा बढ्दै कति छिटो छोराछोरीलाई बुझ्न मदत गर्नेछ।
नाम "बुद्धि देखि धिक्कार" मा कमेडी को समझ गर्न प्रमुख रूपमा कुरा
"Hansel र Gretel" (भाइहरूलाई Grimm परी कथा): सारांश
कालानुक्रमिक तालिका Turgenev। जीवन र JS को काम गर्दछ Turgenev: कालानुक्रमिक तालिका
Nikolai Dolgopolov: ज्ञात पुस्तकहरू
लुगा लागि ठाडो जहाजहरु छनौट
फर्नीचरको लागि पोलिश - यो के हो?
सूत्र गुण: खुशबूदार hydrocarbons के हुन्
3 कर्म होटल (मिश्र / Sharm एल शेख): फोटो र समीक्षा
स्थानीय Lore संग्रहालय सिजरान: वर्णन, प्रदर्शनियों र समीक्षा
साँप को प्रकार र नाम, फोटो
जन्तरको रूपमा कुनामा मा ऐस्पन stakes। एक काठ खम्बा कसरी बनाउने?